हाम्रो मुद्रा कमजोर कि देश ? | गृहपृष्ठ
Home हाम्रो मुद्रा कमजोर कि देश ?
हाम्रो मुद्रा कमजोर कि देश ?
सपार्न गाह्रो छ, बिगार्न सजिलो । झन् देश बनाउन दिमाग र कार्यान्वयन पक्ष समानान्तर रूपमा लैजान सक्ने खुबी हुनुपर्छ । हाम्रो कमजोरी गरीबी होइन, व्यवस्थापन हो । सुनको कचौरा हातमा लिएर भिख माग्दै छौं, नपत्याउन पाइन्छ ।
ऊर्जा र जलको व्यवस्थापन : यो स्रोतमा हामी सार्क मुलुकभरिमै धनी छौं । समुद्रको कडा पानीलाई प्रशोधन गर्न अर्बौं खर्च लाग्छ । साउदी अरबले २०० गिगावाटको प्लाण्ट जडान गरी ऊर्जा उत्पादन गर्दै मुलुकभरि पानी आपूर्ति गर्दै छ र त्यो अभियानमा साथ दिँदै छ जापानको प्रसिद्ध कम्पनी सफ्ट बैङ्क ग्रू्प । ‘पानी र जवानी रोकिँदैन’ भन्ने भनाइको पछाडि नलागौं ।
जनशक्तिको व्यवस्थापनमा भारतीय र चिनियाँ नपसेको मुलुक संसारमा छैन भन्ने भनाइ थियो । तर, अहिले नेपाली नछिरेको मुलुक छैन भन्दा पनि हुन्छ । खतरा जस्तोसुकै होस् तर पैसा भएपछि रगत दिन्छु भन्ने मानसिकता हाबी भएको छ । अरब र मलेशियामा मर्यादित र अमर्यादित दुवै काममा नेपाली भेटिन्छन् । अपाङ्क शरीर, दीर्घकालीन बिरामी शरीर र लाश भित्रिन थालेको छ, अहिले । विदेशमा काम गर्नु नराम्रो होइन, परिवारबाट पूर्णरूपमा लामो समयसम्म अलग्गिएर काम गर्नुले वास्तविक जीवन नै अवास्तविक हुन पुगेको छ । पेट भरणपोषणको दौड याने कि मुसाको दौड छ । कुनै देश खर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरेर पानी नरम बनाउँदै छ, जुन देशको मूलको प्रशोधन नगरी पिउनयोग्य छ, त्यो देशका जनता आर्थिक असुरक्षाका कारण परिवारसँग बिछोडिन बाध्य छन् । हाम्रो जनशक्तिले अरबका देशहरू बन्दछन्, हाम्रो देश किन बन्दैन ? इँटा र ढुङ्गा हुँदैमा पर्खाल बन्दैन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कौशल र शीपले नै संरचना र पूर्वाधार बन्छन् । हाम्रो कमजोरी त्यही हो । हाम्रा परिश्रमी नागरिक नै फालिएका इँटा र ढुङ्गाजस्ता जिन्सीका रूपमा स्वदेशमा अपहेलित भए । स्वदेशी जनशक्ति नै देशको दिगो शक्ति हो भन्ने तथ्यलाई कहिल्यै आत्मसात गर्न सकेनौं ।
कृषि उत्पादनको व्यवस्थापन स्याउ र सुन्तलाको उच्च उत्पादन बजारमा छ्यालब्याल भएको बेलामा नै आयातित सुन्तला र स्याउ सस्तो हुने देशमा अरू कृषि उपजको बेमौसमी बजार कस्तो होला ? शीतभण्डारको अभ्यास केही निजी संस्थाले गरेको देखिन्छ । तर, सरकार बिल्कुलै बेखबर र उदासीन देखिन्छ । स्वदेशीे उत्पादनलाई कसरी कुन सूचीमा राख्ने ? कुन मूल्य दिएर नेपालको कृषिक्षेत्रलाई उद्योगमा परिवर्तन गर्ने, नेपाल सरकारको ठूलो सरोकार बन्नुपर्छ ।
कानूनको सबल कार्यान्वयन :धनी, गरीब, होचो, अग्लो, दुब्लो, पातलो, अपाङ्ग, बालबच्चा, बूढाबूढी, युवायुवती, नारीपुरूष, बलियो, कमजोर सबैले पूर्वाग्रहविना सेतो न्याय पाउनुपर्छ । अपराध, अन्याय, हिंसा, लूट, चोरी, बलात्कार गर्दा सख्त दण्ड सार्वजनिक रूपमै हुनुपर्छ, ताकि देख्नेहरूमा त्यो कुकार्य गर्ने साहस नआओस् । राजदरबारजस्तो संवेदनशील अङ्ग सुरक्षित नभएको उदाहरण जनताबाट लुकेको छैन ।
उद्योग व्यवस्थापन : सरकारले विशुद्ध नेपाली उत्पादन र दैनिक उपभोग्य उत्पादनको सूची बनाएर उद्योगका लागि अनुमति दिनुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालका उद्योगहरूलाई सजिलै पाखा लगाइरहेको उदाहरण छ । साबुन, टुथपेष्ट, टुथब्रश, डिटर्जेण्ट पाउडरजस्ता उत्पादन पहिला नेपालमै उत्पादन नभएको होइन, तर ठूलो स्केलमा कामदारबाट गुणात्मक उत्पादन सस्तोमा गर्नु, विज्ञापन र बजार व्यवस्थापनमा तालीमप्राप्त कुशल जनशक्तिको प्रयोगको परिणामले नेपालको उत्पादन कम गुणस्तरको जस्तो देखियो । नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धाको बजारमा टिक्न सकेन । सानो बजारमा टिक्न सजिलो छैन । वाइवाई चाउचाउबाट धेरै सिक्न जरुरी छ । नेपालभित्र र नेपालबाहिर केके खपत हुन्छ, गहिरो अध्ययनपश्चात् मात्र स्थापना र व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ ।
सत्कार क्षेत्रको व्यवस्थापन स्वदेशी ठूलो जनशक्ति अहिले रेष्टुराँ र कफीचेनमा अनुभवी छ । पर्यटनको सम्भावना भएको मुलुकमा सत्कारक्षेत्र अति व्यवस्थित हुनुपर्छ ।
सिमानाको व्यवस्थापन : अमेरिका जस्तो अत्याधुनिक मुलुकमा सिमानाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा गैरअमेरिकी नागरिकको आगमन नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे भएको सुन्नमा आउँछ । राष्ट्रको स्रोतसाधनको सुरक्षा र संरक्षणका लगि सीमा कडाइका साथै व्यवस्थित हुनुपर्छ ।
खानी र खनिज : नेपालमा कुनै पनि खानी र खनिजको मात्रा तथा स्थान पहिचान भए तापनि स्रोतको परिचालन हुन सकेको छैन । उच्च सुरक्षा संयन्त्र, देशप्रति निष्ठावान् शाषक, शीघ्र ढुवानीका लागि व्यवस्थित यातायात सञ्जाल हुन सकेमा आयातलाई माथ गर्नेगरी निर्यात गर्न सकिन्छ । २० वर्षअघिको जापानको मुद्रा र अहिलेको मुद्रा दाँजौं र समाधान खोजौं । हामी कहाँ र उनीहरू कहाँ ?
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानीको बाढीको नियन्त्रण : सरकारले मुद्रा अपचलनका लागि निश्चित नियमकानून बनाएकै छ । कति रकम शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि बाहिरिएको छ र त्यो लगानीले नेपाललाई कति फाइदा पुर्‍याएको छ, कुनै लेखाजोखा छैन । एक खुट्टा नेपाल र अर्को खुट्टा विदेशमा राख्नेगरी आफूले आफूलाई नै विश्वास नगर्नेहरूले आआफ्ना सन्तानलाई अरू मुलुकको नागरिक बनाउन गइरहेको पक्षमा सम्बन्धित निकायले आँखा चिम्लेको भान हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा देशको आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी खर्च भइरहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन ।
विलासिताको वस्तुमा नियन्त्रण : सुन विलसिताको वस्तु हो । विद्यमान कानूनका मौन अक्षरहरूले तस्करीलाई रोक्न नसकेको तस्वीर हाम्रो अगाडि घामजस्तै छर्लङ्ग छ । गाडी, मोटरसाइकल धितो (पुर्खौली सम्पत्ति)को आधारमा होइन, हालको आम्दानीको सीमा हेरेर दिइनुपर्छ, बरु भन्सार दर घटाइयोस् । आवश्यकताको तीव्रता हेरेर सवारी खरीद गर्न पाइने नियम बनाइयोस् । यो नियमले सवारीको चाप, दुर्घटना र राष्ट्रिय धनको दुरुपयोगको नियन्त्रण पनि हुन्छ ।
हाम्रा नेपालका कर्मचारी, सैनिक, प्रहरीले कहिलेसम्म भारत, बेलायत र सिङ्गापुरका सैनिक र प्रहरीमा भर्ती हुन नपाउनुको पीडा लिएर बाँच्ने ? कहिलेसम्म नेपालीसँग नेपाली नै लज्जित हुनुपर्ने ? स्वाभिमानी नेपाली हौ भने व्यवहारमा नझुक्ने नेपाली बन र बनाऊ । युवाहरूलाई भाडामा विश्वभरि नै फैजाउनु थियो त बेलायतसँगको विजयगाथा किन गाउनु ? गुलामी नै गर्नु थियो त नेपालले आधाभूभाग गुमाउनु र अहिले त्यही मुलुकका स्थायी बासिन्दा बन्न अर्बौं रकम लगानी गर्न बाध्य हुनुपर्ने थिएन । सत्तामा हुँदा या नहुँदा विकासको मुद्दामा हामी एक हुनैपर्छ । पशुपति र स्वयम्भूका बाँदरजस्तो पारामा विभक्त हुँदा नेता र जनता विक्रीका जिन्सीजस्तै भएका छौं ।